Ulwenziwo lokuthile Smart - Ningbo Imbaleki Co., Ltd.
INKQUBO YOKUQALA KWIMISEBENZI
Ngokuphathelene nokulungiswa kwempahla, i-metal die-casting & stamping, unyango lomphezulu, ibandla kunye nokupakisha, i-NINGBO RUNNER ifezekise i-automation ephezulu kwaye yenza ubeko olupheleleyo lwenkqubo. Ukugubungela ikhonkco ngalinye lezindululo zokuphucula, i-RIT enqamleza isebe (iQela lokuPhucula iqela) imisebenzi yokuphucula kunye nenkqubo yokuwela okanye inkampani yeeprojekthi ezinkulu, iye yakha inkqubo yolawulo lweNkqubo yeembaleki (i-RPS) eneempawu zeMbaleki kunye Injongo "yokusebenza okuphezulu, umgangatho ophezulu kunye nobukrelekrele" ngenkqubo yokwenziwa kunye notshintsho olukrelekrele.
01 UKWENZA ISIQENDU
Ningbo RUNNER izinikele kuphando lwezixhobo zokubumba zeplastikhi kunye nolawulo lwenkqubo. Inika izisombululo ezizimeleyo zoyilo lwesikhunta, i-die-cast cast kunye netekhnoloji yonyango yomphezulu kunye nokuveliswa okuzenzekelayo koomatshini besandla sesithathu (amaleli, abatshizi kunye nabavelisi), imveliso yezitishi ezininzi eqhubekayo kunye nemveliso engangqubaniyo eqhubekayo, ukufezekisa okungagunyaziswanga nokuzenzekelayo ukusebenza ngokusisiseko kwaye kufutshane nemowudi yokuvelisa yenqanaba loshishino lwe-3.0.
02 UNYANGO LOMPHAKATHI
Inokuqonda ibhetshi encinci, ukungafani kunye nemveliso ngobuninzi ngaxeshanye.
Umphezulu wokwaleka unokhuseleko olulungileyo, umbala ozinzileyo, ohlala ixesha elide, i-antibacterial, anti-stain kunye nokucoca ngokulula, i-anti-fingerprint neminye imisebenzi. Inkampani inokuyibona imveliso eluhlaza yokhuselo lokusingqongileyo, kwaye amanzi amdaka asondele kwindawo ekhutshiweyo.
03 INDLELA YOKUZENZA NGOKUPHELELEYO NENDIBANO
I-NINGBO RUNNER inendibano yokusebenzela engenothuli kwaye isebenzisa izixhobo ezizenzekelayo ezizenzekelayo kunye nezixhobo ezizenzekelayo zokupakisha kunye nokuhlanganisa ukuze kufezekiswe indibaniselwano yabasebenzi kunye noomatshini. Ngeli xesha, u-Weilin uyakwazi ukwenza izixhobo kunye nezinto ezidityanisiweyo kwaye adibanise i-R & D, uyilo, ukwenziwa, ukuhlangana kunye nokuvavanywa kwezixhobo kunye nokulungiswa kwenye.
Uphando oluzimeleyo kunye nophuhliso lwezixhobo eziluhlaza
Uphando oluzimeleyo kunye nophuhliso lweteknoloji yokubumba ekrelekrele
Uphando oluzimeleyo kunye nophuhliso lwetekhnoloji yonyango yomphezulu eluhlaza